यसरी सुधार्न सकिन्छ लकडाउनपछिको भविष्य
मुख्य पृष्ठविचार विश्लेषणयसरी सुधार्न सकिन्छ लकडाउनपछिको भविष्य
कोरोना भाइरस महामारीले विश्व नै आतंकित भइरहेको बेला विश्व अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो नै असर पुगेको छ । शेयर बजार डामाडोल छ । विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारि गिरावट आएको छ । विश्व तरंगित छ र विकसित देशहरूमा कोरोनाको महामारी निकै भयावह स्थितिमा छ ।
अमेरिकालगायत यूरोपियन मुलुक बेलायत, फ्रान्स, स्पेन जस्ता विकसित देश कोरोनाको चपेटामा परेको छ र युरोपलगायत अमेरिकामा विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म अमेरिकामा मात्र ६१ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ र १० लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । हालसम्म ३० लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित छन् र २ लाख २८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
यसरी संक्रमण २ सय १० भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिएको छ, जसमा नेपालमा पनि हालसम्म ५७ जना संक्रमित छन् भने १६ जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको छ । यसरी संक्रमण फैलिरहँदा जोखिमको उच्च स्थितिलाई मध्येनजर गरी देश पूरै लकडाउन गरिएको छ । ११ चैत्रबाट सुरु भएको लकडाउन आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि जारी नै छ ।
देशलाई लकडाउन गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न त सहज होला तर देशको अर्थतन्त्र पनि नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको जो कोहीले नि अनुमान लगाउन सक्छन् । उद्योग, कलकारखाना, यातायात, आन्तरिक तथा वाह्य उडान सबै बन्द छन् । ज्याला मजदुरी साथै विभिन्न सरकारी तथा निजी संघ-संस्थामा कार्यरत मजदूरहरू रोजगारमा जान पाएका छैनन् । दैनिक उपोभोग्य सामग्रीहरू बजारमा हाहाकार हुन लागेको स्थिति छ साथसाथै कालोबजारी पनि व्यापक रहेको छ ।
यसैगरी कोरोनाको चपेटामा विश्व नै गुज्रिरहँदा नेपालमा पनि यसको असर निकै नै पर्ने देखिन्छ । माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनका सह-संस्थापकको रूपमा परिचित विलियम हेनरी गेट्स भन्छन्, ‘विश्वलाई पूर्ण रूपमा पहिलेको स्थितिमा फर्काउनलाई यसको खोप पत्ता लगाउन जरुरी छ ।’ उनले खोप अनुसन्धानको लागि अरबौं सहयोग गरेका छन् ।
विश्वबजारलाई पूर्ण रूपमा पहिलेको स्थितिमा ल्याउनको लागि पनि कोरोनाविरुद्धको खोपको अन्त्यन्तै जरुरी पनि छ । होइन भने विश्वले यसको धेरै नै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि भयावहको स्थिति सिर्जना गर्ने कुरा धेरै नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् ।
यसरी विभिन्न आँकडाहरू आइरहँदा यस रोगविरुद्ध लड्नसक्ने खोपहरूको पनि परीक्षण विभिन्न देशहरूमा भैरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, इरान साथै चीन आफैंले पनि यसको खोपको मानव शरीरमा परीक्षण गरिरहेको छ । हालै मात्र चीनले कोरोनाविरुद्धको खोप आगामी वर्षको सेप्टेम्बरसम्ममा प्रयोगमा आउने जानकारी दिएको द स्टा ले लेखेको छ ।
यसरी नै पूरै विश्व कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको बेला नेपाल जस्तो कम विकसित रास्ट्रहरूमा आर्थिक प्रभाव धेरै नै परेको देखिन्छ । यस रोगको पूर्णबिराम हुनलाई धेरै समय लाग्न सक्ला तर यसरी नै नेपाल जस्तो गरिब रास्ट्रमा ज्याला मजदूरी गरेर दिन गुजारा गर्नेहरू के सधैँ एक कोठाभित्र नै बसीरहलान् भन्ने छैन । यहाँ रोगभन्दा गरिबलाई भोक ठूलो लाग्छ । यसको विकल्प नेपाल सरकारलगायत यहाँको स्थानीय सरकारले पनि यस कुरामा चासो दिन निकै नै जरुरी छ ।
लकडाउनपछिको भविष्य के ?
लकडाउनपछिको भविष्य के ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? तत्काल यस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नत्र भने लकडाउनपछिको भविष्य निकै नै भयावह हुन सक्ने अनुमान लगाउन जो कोहीलाई नि गाह्रो पर्दैन । महिनौंसम्म लकडाउन थपिरहने र यसको विकल्पहरू नखोज्ने हो भने कोरोना रोगले भन्दा धेरै मानिसहरू भोकले मर्ने कुरा धेरै सोसल मिडियाहरूमा आइनै रहेका छन् । नेपालमा यस्ता रोगहरू आउन सक्छन् र यसबाट बच्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वतयारी नभएकोले पनि यहाँ मानिसहरूले निकै कस्ट बेहोर्न बाध्य हुन्छन् ।
लकडाउनपछिको भविष्य के ? विकल्पहरू के हुन सक्छन् ? तत्काल यस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नत्र भने लकडाउनपछिको भविष्य निकै नै भयावह हुनसक्ने अनुमान लगाउन जो कोहीलाई नि गाह्रो पर्दैन । महिनौंसम्म लकडाउन थपिरहने र यसको विकल्पहरू नखोज्ने हो भने कोरोना रोगले भन्दा धेरै मानिसहरू भोकले मर्ने कुरा धेरै सोसल मिडियाहरूमा आइनैरहेका छन् । नेपालमा यस्ता रोगहरू आउन सक्छन् र यसबाट बच्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वतयारी नभएकोले पनि यहाँ मानिसहरूले निकै कस्ट बेहोर्न बाध्य हुन्छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पको चपेटाबाट भर्खर उन्मुक्त पाउन खोजिरहेको नेपालमा भविष्यमा यस रोगले के कतिको असर पुर्‍याउला त्यो अनुमान गर्न त सकिँदैन तर बेरोजगारी र भोकमारीले नेपाललाई निकै धेरै संकट पुर्‍याउने छ । यसको पूर्वअनुमान गर्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल सरकार प्रदेशलगायत स्थानीय निकायहरूबाट आम्दामीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ ।
घरमै बसेर समयको सदुपयोग हुने कृषिलगायत घरेलु साना उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने सामग्रीहरूलाई स्थानीय निकायको निगरानीमा बजारसम्म पुर्‍याउने साथै उपोभोक्ताको घरदैलोसम्म आवश्यक कुराहरू आपूर्ति गरिदिने जस्ता कार्य नेपाल सरकारले योजना बनाउन सक्छन् ।
यसरी बजारमा केही मात्रामा भएपनि दैनिक उपोभोग्य वस्तुको आपूर्तिको पनि हाहाकार हुने छैन । यसरि सुरक्षित उपायहरू अपनाएर गर्न सकिने थुप्रै कुराहरू छन् जसले आम मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न मद्धत पुग्छ । यस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट छिटै नै कार्ययोजनाहरू लिएर आएमा नेपालले कोरोना जस्ता महामारी मात्र हैन भविस्यमा आउने ठूला संकटहरूबाट पनि मुक्ति पाउने छ ।